Huawei သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ချီလီ၊ ကိုလံဘီယာနှင့်မက္ကဆီကိုတို့တွင် Honor ဖုန်းများရောင်းချမည်ဖြစ်သည် Androidsis
Huawei သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်မက္ကဆီကို၊ ချီလီနှင့်ကိုလံဘီယာတို့တွင် Honor ကိုရောင်းချလိမ့်မည်
စျေးကွက်အသစ်တစ်ခုသို့ ၀ င်ခြင်းသည်ဖုန်းတံဆိပ်များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်မချမှီဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းများပြုလုပ်သည်။ ကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ခြင်းအပြင်။ Huawei ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ အလွန်အရေးကြီးသော။ ယခုနှစ်မှစ လက်တင်အမေရိကရှိ Honor ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချမည်.
၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်များစွာအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတော့ Honor ကဒီအခွင့်အရေးကိုရယူချင်တယ်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီမှပစ္စည်းများကိုလက်ခံရရှိမည့်နိုင်ငံများစွာရှိပြီးဖြစ်သည်။ မက္ကဆီကို၊ ချီလီနှင့်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံများဖြစ်သည်.
Huawei သည်လက်တင်အမေရိကရှိ Honor အတွက်စျေးကွက်နယ်ပယ်တစ်ခုရရှိလိုသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကတစ် ဦး ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည် ရန်လိုကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ဤစျေးကွက်များတွင်။ ဤမော်ဒယ်များကိုစျေးကွက်အမျိုးမျိုးတွင်လျင်မြန်စွာမိတ်ဆက်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်သူတို့ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။
၎င်းတို့တွင်ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူ၏ profile ကိုရှင်းပြီးသားဖြစ်ပုံရသည်။ ၎င်းသည်အသက် ၁၈ မှ ၄၅ နှစ်အကြားရှိသူနှင့်ဆက်သွယ်လိုသည်။ ထို့အပြင် Honor ကိရိယာများကိုဤနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံ၌ရရှိနိုင်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များနှင့်အွန်လိုင်း။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်သူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုဝယ်ရန်အလွန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။
ယခုအချိန်တွင် မက္ကဆီကို၊ ချီလီနှင့်ကိုလံဘီယာတို့တွင်ရောင်းချမည့်စက်ပစ္စည်းစာရင်း။ ဤမော်ဒယ်များတွင်၎င်းတို့၏လတ်တလောဖုန်းနှစ်လုံးပါ ၀ င်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ဂုဏ်အသရေ 7X နှင့် ဂုဏ်အသရေကြည့်ရန် 10။ ကုမ္ပဏီ၏အထင်ရှားဆုံးကိရိယာနှစ်ခု။
လာမယ့်နှစ်အတွင်းဒီစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်ရန် Honor မျှော်လင့်နေသည်။ ဒီပေါ်ပေါက်လာမယ့်ရက်ကိုဘယ်သူမှထုတ်ဖော်မထားပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီထက်ပိုပြီးသိချင်ရင်နည်းနည်းလောက်စောင့်ရ ဦး မယ်။ သံသယမရှိဘဲ၏စျေးကွက် လက်တင်အမေရိက သူတို့အများအပြားထုတ်လုပ်သူများအတွက်အကျိုးစီးပွားရရှိနေကြသည်။ ဒီစျေးကွက်တွေမှာ Honor ကိုဖွင့်ဖို့ Huawei ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Huawei သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်မက္ကဆီကို၊ ချီလီနှင့်ကိုလံဘီယာတို့တွင် Honor ကိုရောင်းချလိမ့်မည်
DOOGEE X55: Side Fingerprint Reader နှင့်အတူကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံး FullView စမတ်ဖုန်း
Loapi: သင်၏စက်ကို အသုံးပြု၍ cryptocurrencies ကိုတူးဖော်သော malware